Ny Krizy Ara-toekarena Migeja An’i Tiorkmenistana, Ny Filoha Mihira Sy Mitaingina Bisikilety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2017 18:22 GMT
Nahasarika ny sain’ny olona ny hira Pop iray nosoratana sy nohirain’ilay filohan'i Tiorkmenistana, Gurbanguly Berdimuhamedov, niaraka tamin'ny zafikeliny roa rehefa navoakan'ny Chronicles of Turkmenistan, haino amanjery tsy miankina, tao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo izany lahatsary izany.
Tsy tena mahatratra ny lentan’ilay hira malaza eran-tany, “Despacito”, izy ity, kanefa na izany aza dia nisy mpankafy sasany toa nankamamy ilay hira:
Feo tena manga. Ilain’ny olon-drehetra ny fialamboly ara-kolontsaina. Mameno ny fanahy ity hira ity !
Firenena anjakan’ny tsy fanajana ny zon'olombelona i Tiorkmenistana ary miaina fahasahiranana ara-toekarena, amin'ny fiakaran'ny tsy fananana asa sy ny fiakaran‘ny tsy fahampian’ny entana fototra. Saingy aleon’i Berdimuhamedov, izay “nambabo ny fo”-n'ny 97.69% amin’ireo mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny Febroary 2017, tsy miteny na inona na inona momba izany ampahibemaso, fa mampiely ny “zava-dehibe vitan'ny firenena sy ny fahombiazan’ny fiainan'ny olony” indray no ataony.
Maro tamin’ireo zava-bita ireo no izy tenany ihany no nanao azy: tsy ny “Yadimda” (fiteny ao Tiorkmenistana midika hoe “Tsaroako”) no hira voalohany nosoratana sy nohirain’ity filoha Tiorkmenina ity, ary tsy ny fanoratana hira sy ny fihiràna ihany no talentany.
Nanoratra boky 40 mahery miresaka lohahevitra samy hafa i Berdimuhamedov, izay heverin’ny gazetiboky Foreign Policy ho ” iray amin'ireo mpanao didijadona ratsy indrindra teto amin’izao tontolo izao”. Ny iray tamin’ireo sanganasany tamin’ny taon-dasa izao ohatra dia noraisin’ireo mpiray tanindrazana aminy tamim-panajana miendrika fivavahana mihitsy:
Nandalina fianarana momba ny fitsaboana nify sady mpanao fanatanjahantena mavitrika izy, ary indray mandeha dia notereny hiaraka aminy ho any aminà klioba fitaizam-batana ireo minisitra eo ambany fifehezany:
Ary tamin'ny faran'ny Jolay, mialoha ny fampiantranoan’ny firenena ny Lalao Aziatika Anaty Trano sy ny Haiady amin'ny Septambra, dia nandray anjara taminà fivoizana bisikileta ny filoham-pirenena, izay nampihato ny fitaterana fiara manokana tao an-drenivohitra.
Niakatra teo amin'ny fitondrana ilay Berdimuhamedov, 60 taona, tamin'ny faran'ny 2006 rehefa nodimandry ny nialoha azy, Saparmurat Niyazov, izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny fahaleovantenan'i Tiorkmenistana tamin'ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1991. Nanangana sekta fanindrahindràna ny maha izy azy manodidina ny fitondrany i Niyazov, izay niantso ny tenany ho Turkmenbashi (Rain'ny Tiorkmenina). Ankoatra ny zavatra hafa, dia novainy ho amin'ny teny Latinina ny abidia tao amin'ny firenena, novainy ny anaran'ny volana (nataony anaran-dreniny ny Aprily), novainy ny anaran'ny andro (novainy hanaraka ny “Rukhnama” izay bokiny ara-panahy ny Sabotsy), ary nampihatra hevitra hafahafa maro ihany koa izy ankoatra ireo. Lasa boky masina faharoa ho an'ny Tiorkmenina ny “Rukhnama” aorian’ny Korano, tsy maintsy nianatra tsianjery azy io ny olon-drehetra. Manodidina ny 15.000 kosa ireo tsangambato naorina manerana ny firenena maneho ny filoha, izay maro tamin'ireo no vita avy amin'ny volamena.
I Gurbanguly Berdimuhammedov naka sary tamin’ny 2009 nandritra ny fitsidihana niaraka tamin’ny Filoha Barack Obama sy ny vadiny Michelle Obama. Sary nalain’i Lawrence Jackson. Sehatra ho an'ny daholobe.
Taorian'ny nahafatesan'i Niyazov, nandrava ny fanindrahindràna ny maha-izy azy an'ity nialoha azy ity i Berdimuhammedov, izay manana ny anaram-boninahitra ofisialy (natolony ny tenany ihany) hoe “Mpitarika ny Firenena” sy “Arkadag” midika hoe “mpiaro”, ary nanorina ny fanindrahindràna azy manokana.
Notohizan’ny fitondrany ny famerana ny fahalalahana. I Tiorkmenistana no misy ny tahirin’entona fahefatra lehibe indrindra eran-tany, ary mijaly noho ny krizy ara-toekarena goavana– kanefa tsy ho ela dia hampiantrano ny Lalao Aziatika.
Noho ny zava-misy, nanakiana azy ny mpaneho hevitra iray tao amin'ny Youtube, teo ambaninà horonantsary iray tamin'ny Janoary 2017 nisy ilay filoha mihira:
Izao no mitranga rehefa misy olona manam-bola be sady mampiasa ny harena sy loharanon-karem-pirenena ho an'ny tenany. Tsy ho gaga aho raha te hanana sambondanitra na ny balafomanga mahataka-davitra ho azy manokana izy rahampitso. Misedra olana lehibe ny firenena, noana sy mangatsiaka ny vahoaka, ary tsy misy tahiry, tsy misy famokarana, ny entona sy izay sitrak’ilay Masindahy Gurbanguly Lehibe ihany no anto-pivelomana.
23 ora izayKazakhstan